Home Cayaaraha Madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez”ma rabto” Kylian Mbappe
Madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa shaaca ka qaaday in kooxdu ay haatan soo afjartay xiisihii ay u qabtay Kylian Mbappe laakiin uu albaabka u furay in uu mustaqbalka u dhaqaaqo weeraryahanka.
Mbappe, oo 23 jir ah, ayaa si xoogan loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Santiago Bernabeu, xilli uu qandaraaskiisu dhacayo xagaagan.
Si kastaba ha ahaatee, xiddiga heerka caalami ee dalka France ayaa go’aansaday inuu mustaqbalkiisa u hibeeyo kooxda ka dhisan Paris bishii hore, waxaana uu qalinka ku duugay heshiis cusub oo seddex sanno ah ilaa June 2025, taasoo soo afjartay rajadii Perez ee ahaa inuu weeraryahanka u qoro Galactico cusub.
Perez ayaa tan iyo markii uu El Chiringuito u sheegay in aanu doonayn in uu la soo saxiixdo Mbappe, taa beddelkeedana uu u furan yahay in uu xiddiga reer France kooxda ku soo biiro mustaqbalka mustaqbalkiisa ciyaareed.
Weligay ma dhihin way dhammaatay inta u dhaxaysa Mbappe iyo Real Madrid weligay ma dhihin taas, seddex sano gudahood, waxyaabo badan ayaa isbedeli kara, laakiin ma rabo Mbappe kan ugu dambeeya ma ahan Kylian la mid ah oo aan rabnay. waxa uu rabay midda dhabta ah,” ayuu yiri Perez.
“Real Madrid mar walba waxay u furan tahay inay soo iibsato ciyaaryahano fahamsan inuusan qofna ka weyneyn kooxda, ma jiri doono saxiixyo kale, hadda.
Previous articleKooxda kubadda cagta Liverpool oo shaacinaysa saxeexii saddexaad ee ay xagaagan samayso
Next articleKOOXDA Liverpool oo ogolaatay inay 5.5 milyan ginni kula soo wareegto xiddiga Aberdeen ee Calvin Ramsay